जानौं, हफ्तामा कति पटक यौनसम्पर्क गर्नु उचित ! - सुनाखरी न्युज
जानौं, हफ्तामा कति पटक यौनसम्पर्क गर्नु उचित !
Posted on: July 6, 2021 - 7:20 am
यौन सम्पर्क गर्नुको एक होइन अनेक फाइदा छन् । शरीरका लागि मात्र नभई स्वास्थ्यका लागि पनि सेक्स निकै लाभकारी मानिन्छ । नियमित सेक्स गरिरहनाले विभिन्न रोगबाट जोगिन मद्दत हुन्छ ।
त्यतिमात्र होइन विभिन्न अध्ययनका अनुसार नियमित यौन सम्पर्क गर्नाले स्तन र प्रोस्टेट क्यान्सरको जोखिमलाई कम गर्छ । साथै यौन सम्पर्कले मुटु बलियो हुने र तनावको खतरालाई पनि कम गर्छ ।
यो तथ्यको मतलव यो पक्कै पनि होइन कि हामी यस्तो युगमा बाचिरहेका छौं जहा यौन सम्पर्क हुँदैन । किनकी औसतन एक एडल्ट सालमा ५४ पटक सम्म यौन सम्पर्कको आनन्द लिन्छन् । यसको मतलव हो की हप्तामा एक पटक भन्दा केही बढि । त्यहि एक साथ रहने विवाहित जोडि ५१ पटक सम्म यौन सम्पर्क गर्ने गर्छन् ।
उसो त हफ्तामा कतिपटक यौन सम्पर्क गर्नाले सम्बन्धमा सन्तुष्टि र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले ठीक मानिन्छ भने हफ्तामा एक पटक भन्दा धेरै सेक्स गर्नाले त्यति धेरै खुशी नमिल्न नि सक्छ जति एक पटकको यौन सम्पर्कले दिन्छ । यदि तपाईं धेरैपटक यौन सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने फ्रेशनेसका लागि तरिकामा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ र नयाँ एक्सपेरिमेन्टहरु गरिरहनुपर्छ । एजेन्सीको सहयोगमा